Warar Goos goos ah: Ruunkinet 12/12/2009
Indha Shareerka oo Guriceel laga mamnuucay
Maamulka Ahlusunnah Waljameecah ee degmada Guriceel ayaa mamnuucay qaadashada haweenka indhashareerka sababo amaanka la xariira.
Kulan ay shalay galinkii dambe xarunta degmada isugu imaadeen saraakiisha sar sare ee amaanka magaaladaasi, ayaa waxay isku soo qaadeen in la mamnuuco xirishada indha shareerka.
Taliyaha amaanka Ahlusunnah ee gobalka Galgaduud ee Ahlu Sunna Waljamaaca ee Maxed Shidane Diiriye, ayaa sheegay in go'aankaasi ay qaateen ka dib markii ay arkeen sida ay yiraahdeen dad si qaldan u isticmaalaya Indhashareerka.
"Maadaama aanu waajib diini ah aheyn xirashada indhashareerka, aan aragnayna wixii ka dhacay Muqdisho todobaad ka hor, waxan go'aansannay inaan u sheegno dadka in indhashareerka la mamnuuco ayna haweenka si kale isku asturaan oo ay xirtaan jalbaabka iyo waxa la midka ah" ayuu taliyuhu yiri.
Go'aankan ma ahan mid qaab awoodeed loo dhaqan galinaayo, laakiin waa mid ku saleysan si amaanka loo adkeeyo aawadeed, ayuu Max'ed Shidane sii raaciyay.
Nin qaabka haweenka u soo labistay ayaa 3dii Bishan isku qarxiyay Hotelka Shaamo ee Muqdisho, halkaas oo ay ka socotay xaflad qalan jibin ardey baratay cilmiga caafimaadka, waxana halkaas ku dhintay Professero, Dhaqaatir, Saxafiyiin, wasiiro iyo dad kale oo aad u badan, waxana ku dhaawacmay 50 in ka badan oo kale.
Xubin Somaali ah oo Alqaacidda ka tirsan oo uu Mareykanku sheegay inay ku dileen Pakistaan
Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in hogaamiye sare oo Alqaacidda ka tirsanaa kaas oo la rumeysan yahay in uu ahaa ruuxii isku soo xiray Alqaacidda iyo kooxda Alshabaab ee Soomaaliya uu ku dhintay buuraha Wasiristaan ee dalka Pakistan.
Sarkaalka Mareykanka ah oo ka mdi ah saraakiisha la dagaalanka argagixisada, ayaa isaga oo codsaay inaan magaciisa la sheegin waxa uu shaaciyay in Salax Al Somali uu horaantii isbuucan ku dhintay gobalka buuraleyda ah ee dalka Pakistaan galbeedkiisa ku yaal.
Sarkaalku ma aanu sheegin sida uu ninkan u dhintay.
Waxa la rumeysan yahay Alsomali in uu ahaa ninkii isku xiray Alqaacidda iyo Shabaab oo dagaalka Alqaacidda dunida ka waddo uu ururkasi hadda Soomaaliya uga wado.
NGO sheegay in gabdho Soomaaliyeed lagu qayaano u qaadista Yurub
NGO gudaha Kenya ka dhisan ayaa sheegay in dagaallada iyo fowdada Soomaaliya ka jirta ay sababtay in ay timaaddo ka ganacsiga bini aadamka gaar ahaan gabdho Soomaaliyed oo laga keeno Libooy Kenya iyo meelo kale oo gudaha Kenya ka mid ah, kuwaas oo dalal ka mid ah Yurub la geeyo kuwaas oo loo sheego inay dib u dejin helayaan laakiin shaqooyin kale oo fool xun lagu qabto.
Xubbiye Xuseen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Womankind, ayaa sheegtay in isbuucii gabdho yar yar oo tiradodoa gaareysa 20 illaa 50 inta u dhaxeysa laga keeno gobalka waqooyi bari lana geeyo Nayroobi halkaas oo markii dambena loogu sii gudbiyo dalalka Yurub si ay u noqdaan kuwa jirkooda ka ganacsada.
Xubiye ayaa sheegtay in sidoo kale haweenka dhibaatadan ku dhacday ay ku jiraan kuwa ku noolaa xeryaha barakaacayasha ee gudaha Soomaaliya.
Haweenka, ayaa markii hore loo sheegaa in dib u dejin loo sameynayo marka ay tagaanna meeshii ay rabeen, waxa lagu qasbaa in ay noqdaan kuwa ka shaqeeya meelaha gadhaha jirkooda ka ganacsada.
NGO-ga ayaa sheegay inaanay jirin wax badan oo arrinkan ka qaban karaan hadda.
Alshabab oo mid ka mid ah xoogageeda shaqadii ka errisay xukun karbaashna ku fulisay
Dhaq dhaqaaqa Al-shabaab ee degmada Afmadow ee gobalka Jubada Hoose, ayaa karbaashay mid ka mid ah maleshiyadaas oo lagu eedeeyay in uu isticmaalayay maandooriyaha qaadka iyo sigaarka.
Gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka J/hoose Sheekh Maxamed Xasan Abuu Zakariya ayaa sheegay in xoogaga amaanka ay soo qabteen ninkan shalay galinkii dambe isagoo isticmaalaya qaadka iyo sigaarka.
Ma aanu sheegin inta karbaash ee ay ku dhufteen, hasa yeeshee waxa uu sheegay inay ka musaafurin doonaan degmada iyo ka sii mid ahaanishiyaha xoogagooda.
Waa xukunkii ugu horeeyay ee nuucan ah oo lagu qaado xubin Shabaabka ka tirsan.